Wararka - Ma rabtaa in aad ku durto microchips RFID Tag xaywaankaaga?
Tag furaha PVC-ga ee foornada/Snap-off Tag
Ma rabtaa in aad ku durto microchips RFID Tag xaywaankaaga?
Dhowaan, Japan waxay soo saartay xeerar: laga bilaabo Juun 2022, dukaamada xayawaanku waa inay ku rakibaan jajabyada elektiroonigga ah ee xayawaanka la iibiyo. Markii hore, Japan waxay u baahnayd bisadaha iyo eeyaha laga keeno si ay u isticmaalaan microchips. Horaantii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, Shenzhen, Shiinaha, waxay hirgelisay "Sharciga Shenzhen ee Ku-tallaalidda Tag-Eletarooniga ah ee Eyda (Trial)", iyo dhammaan eeyaha aan lahayn implants chip waxaa loo tixgelin doonaa eeyaha aan shatiga lahayn. Ilaa dhamaadkii sanadkii hore, Shenzhen waxa ay si buuxda u daboolay maaraynta chip rfid eyga.
Taariikhda codsiga iyo heerka hadda ee jajabyada alaabta xayawaanka. Dhab ahaantii, isticmaalka microchips ee xayawaanka maaha wax aan caadi ahayn. Xanaanada xoolaha waxay u isticmaashaa inay ku duubto xogta xoolaha. Khubarada cilmiga noolaha ayaa microchips ku dhex beera xayawaanka duurjoogta ah sida kalluunka iyo shimbiraha ujeeddooyin cilmiyeysan. Cilmi-baadhis, iyo ku-beerista xayawaanka rabaayada ah waxay ka hortagi kartaa in xayawaanku lumaan. Waqtigan xaadirka ah, waddamada adduunka oo dhan waxay leeyihiin heerar kala duwan oo loogu talagalay isticmaalka microchips-ka RFID: Faransiisku wuxuu qeexay 1999 in eeyaha ka weyn afar bilood lagu duro microchips, iyo 2019, isticmaalka microchips ee bisadaha sidoo kale waa qasab; New Zealand waxay u baahday eeyaha rabbaayadda in lagu beero 2006. Bishii Abriil 2016, Boqortooyada Ingiriiska waxay u baahday dhammaan eyda in lagu geliyo microchips; Chile waxay hirgelisay Sharciga Mas'uuliyadda Lahaanshaha Xayawaanka sanadka 2019, ku dhawaad ​​hal milyan oo bisadaha iyo eeyaha rabaayada ah ayaa lagu dhex beeray microchips.
Farsamada RFID waxay le'eg tahay cabbirka hadhuudhka bariiska
Chip-ka xayawaanka rabaayada ah ma aha nooca xaashi af-fiiqan oo kale ah oo dadka badankiisu ay qiyaasaan (sida ku cad sawirka 1), laakiin qaab qaabaysan oo la mid ah bariiska hadhuudhka dheer, kaas oo noqon kara ilaa 2 mm dhexroor iyo 10 mm oo dherer ah (sida ku cad sawirka 2). . Qalabkan yar ee "bariiska bariiska" waa sumad la isticmaalayo RFID (Tiknoolajiyada Aqoonsiga Soo noqnoqda Raadiyaha), macluumaadka gudahana waxaa lagu akhriyi karaa "akhriste" gaar ah (Jaantus 3).
Gaar ahaan, marka chip-ka la geliyo, lambarka aqoonsiga ee ku jira iyo macluumaadka aqoonsiga dhaqiyaha ayaa lagu xiri doonaa oo lagu keydin doonaa keydka xogta isbitaalka xayawaanka ama ururka samatabbixinta. Marka akhristuhu loo isticmaalo in lagu dareemo xayawaanka sida jajabka, akhri Qalabku wuxuu heli doonaa koodka aqoonsiga wuxuuna geliyaa koodka kaydka xogta si uu u ogaado mulkiilaha u dhigma.
Weli waxaa jira meelo badan oo loogu talagalay horumarinta suuqa xayawaanka xayawaanka
Marka loo eego "Warqada Cad ee Warshadaha Xayawaanka ee 2020", tirada eeyaha iyo bisadaha xayawaanka rabaayada ah ee ku nool magaalooyinka Shiinaha waxay kor u dhaafeen 100 milyan sannadkii hore, iyagoo gaadhay 10.84 milyan. Kor u kaca joogtada ah ee dakhliga qofkasta iyo korodhka baahida shucuureed ee dhalinyarada, waxaa lagu qiyaasaa in 2024, Shiinaha uu yeelan doono 248 milyan oo bisadaha iyo eeyaha.
Shirkadda la-talinta suuqa ee Frost & Sullivan ayaa soo warisay in sanadka 2019, ay jireen 50 milyan oo calaamadood oo RFID ah, kuwaas oo 15 milyan ay ahaayeen. RFID tags tube galaas, 3 milyan oo qoolley sitooyin ah, inta soo hartayna waxay ahaayeen dhegaha. Sanadka 2019, cabirka suuqa summada xoolaha ee RFID wuxuu gaaray 207.1 milyan yuan, taasoo ka dhigan 10.9% suuqa RFID-ga hooseeya.
Ku dhejinta microchips ee xayawaanka rabaayada ah ma aha xanuun ama qaali
Habka dhejinta microchip xayawaanku waa cirbad subcutaneous ah, oo badanaa ku yaal dhabarka sare ee qoorta, halkaasoo neerfaha xanuunka aan la samaynin, looma baahna suuxdin, bisadaha iyo eyda ma noqon doonaan kuwo aad u xanuun badan. Xaqiiqda, inta badan mulkiilayaasha xayawaanka ayaa dooran doona inay nadiifiyaan xayawaankooda. Isku mar ku duri jajabka xayawaanka rabaayada ah, si uusan xayawaanku waxba u dareemin irbadda.
Inta lagu guda jiro geeddi-socod-abuurka xayawaanka xayawaanka ah, inkasta oo irbadda saliingaha ay aad u weyn tahay, habka silikoonisku wuxuu la xiriiraa daawooyinka iyo alaabta caafimaadka iyo alaabta shaybaarka, taas oo yareyn karta caabbinta oo ka dhigi karta mid sahlan. Xaqiiqda, dhibaatooyinka soo raaca ee lagu geliyo microchips ee xayawaanka rabaayada ah waxay noqon karaan dhiig-bax ku meel gaar ah iyo timo lumis.
Waqtigan xaadirka ah, khidmadda gelinta microchip ee xayawaanka gurigu asal ahaan waa gudaha 200 yuan. Nolosha adeeggu waa ilaa 20 sano, taas oo ah in la yiraahdo, xaaladaha caadiga ah, xayawaanku wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu ku dhejiyo jajabka hal mar noloshiisa.
Intaa waxaa dheer, microchip-ka xayawaanku ma laha shaqo meeleyn ah, laakiin kaliya wuxuu ka ciyaaraa doorka duubista macluumaadka, taas oo kordhin karta suurtogalnimada helitaanka bisad ama eey lumay. Haddii shaqada meelaynta loo baahan yahay, GPS collar ayaa la tixgelin karaa. Laakin ha ahaato bisad ama eey soconayso, xadhiggu waa xadhigga nolosha.